जिन्स र टाइट कपडा लगाउनुहुन्छ ? सावधान! जिन्स र टाइट कपडा हेल्थका लागि हानीकारक! – Khabaarpati
January 8, 2021 January 8, 2021 goodmamLeaveaComment on जिन्स र टाइट कपडा लगाउनुहुन्छ ? सावधान! जिन्स र टाइट कपडा हेल्थका लागि हानीकारक!
स्किनी जिन्स र हुडीस लगाउनु हुन्छ भने सावधान हुनुहोस् । किनभने स्किनी टाइट जिन्स लगाउँदा ब्याक पेन बढ्न सक्छ । ब्रिटिश काइरप्रैक्टिक एसोसिएशन (BCA) का अनुसार, फेशन छनौट तपाईको हेल्थमा गम्भीर असर पार्न सक्छ ।,,,भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला,,,
टिम हाचफुल भन्छन, कुनै पनि कपडा तपाईको मोमेन्टलाई रोक्छ वा तपाईको चल्ने, उभिने, वा बस्नलाई रोक्छ। यसले तपाईको हेल्थ र पोस्टरमा नकारात्मक असर पर्छ। यति मात्र नभई, यो नेक र ब्याक पेनको कारण पनि बन्न साक्छ। ज्वान्ट्स पेनको पनि यो मूख्य कारण हो।,,,भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला,,,